Ireland: Dhul dhib badan hadana sixray
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Jebinta Wararka Safarka » Ireland: Dhul dhib badan hadana sixray
Qayb ka mid ah shabakada derbiyada "nabada" ee dhex mara magaalada oo kala fogeeya labada dhinac
Belfast waa magaalo ku dhow in aan la fahmi karin shisheeye. Waa magaalo aad u qurux badan, oo muuqaal ahaan u shabaha magaalooyin badan oo Yurub ah. Haddana marka ay hoos u dhacaan heerarka sare ee cilmiga bulshada oo ay dhaafaan wajiyada dhismaha ee magaalada, booqdayaashu waxay galaan goob qarsoon.
Belfast waa magaalo si qoto dheer u kala qaybsantay Protestants iyo Catholics - kuwa daacad u ah taajka iyo kuwa u arka taajka inay calaamad u tahay shaqada. Labada kooxood ayaa dhinaca kale u arka argagixiso. Ingriiska ayaa si qurux badan u quustay, taas oo u ogolaatay dhinac kasta inuu sameeyo wax u gaar ah ilaa inta rabshadaha la hayo ugu yaraan.
Dr. Peter Tarlow waxa uu ku sugan yahay Belfast hadda isaga oo la shaqaynaya booliiska oo qabanaya shirar ku saabsan badbaadada iyo amniga. Waxa uu in ka badan 2 sano ka shaqaynayay hudheelo, magaalooyin dalxiis ku jihaysan iyo waddamo, iyo saraakiil amni iyo kuwo gaar ah iyo kuwa guud iyo kuwa booliska labadaba dhinaca amniga dalxiiska.
Mid ka mid ah mowduuca uu ka hadlay ayaa ahaa muhiimada ay leedahay in la waafajiyo shakhsiyadda saxda ah iyo shaqada ku habboon. Shaqooyinka ay ka midka yihiin bilaysku aad bay u kala firdhiyaan qaybo badan oo hoose, inta badana marka sarkaalku helo darajooyin darajo, kordhintaasi waxay la macno tahay in sarkaalka la qaado, kaas oo ku habboon meel ka mid ah booliska oo u rari doona mid cusub. iyo jago aan ku haboonayn shakhsiyadiisa. Badanaa tani waxay keentaa in saraakiisha bilayska ee wanaagsani noqdaan kuwo aan faraxsanayn oo aan ku habboonayn (iyo gudaha) shaqadooda cusub.
Waddan sidaas u kala qaybsan oo taariikhdaas oo kale leh rabshado, in booliiska lagu hayo jagooyinka ay aadka ugu habboon yihiin waa muhiimad weyn. Aasaaska kooxda waa in ay noqotaa talaabadii ugu horaysay ee lagu bixinayo dalxiis badbaado leh iyo sidoo kale nolol maalmeedka muwaadiniinta dalka.
Markii uu qof waydiiyey waxa dhacaya haddii qofku cawaan yahay, jawaabtu way wada sheegaysaa. Halkan, mid waa cawaan Protestant ah ama cawaan Catholic ah! Maqalka jawaabaha sidan oo kale ah waxay caawisaa qof dibadda ah inuu si fiican u fahmo sababta ay u jiraan 42 darbi oo isku xidhan oo kala qaybiya borotostanka iyo Catholics.
Dhammaan waxyaalahan suurtagalka ah ee rabshadaha waxay ku reebayaan booqdayaasha xaalad garasho la'aan. Shakhsi ahaan, Irishku waa dad aad u qurux badan oo kaftan badan. Waxay leeyihiin dareen kaftan ah, way ku raaxaystaan ​​in ay la joogaan, waana naxariis iyo waxtar. Waxaa laga yaabaa in la yaab leh, markii ay dadku ogaadeen in Dr. Tarlow yahay Yuhuudi, adduunka oo dhan wuxuu helay dhoola cadeyn diiran ama isku duubni. Waxa uu qof walba u xaqiijiyey in aanu ahayn Protestant ama Catholic balse uu yahay Yuhuudi. Dhab ahaantii, Irish-ka oo ah dad aad u marti-geliyay waxay noqdeen kuwo sii marti-geliya mar haddii ay caddaatay inuusan ka mid ahayn diin kasta oo Masiixi ah.
Ku darso jaahwareerka
Si ay jahwareerka ugu sii daraan, Protestants iyo Catholics waxay la dagaallamayaan dagaal wakiil ka ah Bariga Dhexe. Protestanku waxay taageeraan Israel iyo mararka qaarkood Ingiriiska ama xitaa Maraykanka, halka IRA (Katooliga) ay taageeraan PLO, Castro, iyo Maduro (Venezuela). Sidaa darteed, haddii Irishku uusan haysan dhibaatooyin ku filan, sidoo kale maskax ahaan ama jir ahaan waxay la safan yihiin dhinacyada iskahorimaadyada adduunka oo aan haba yaraatee wax lug ah ku lahayn.
Run ahaantii, Ireland iyo Northern Ireland aad bay u dhib badan yihiin oo malaha qof shisheeye ahi ma aha, ama weligii ma jiri doono, awood u leh inuu fahmo nuucyada siyaasadeed ee kala qaybinaya magaaladan, dhulkan iyo dadkeeda. Qaar badan ayaa eedeeya Ingiriiska iyo qabsashadiisa, qaar kalena waxay eedaan baadariyadii dhexe ama waddama kale oo Yurub ah, qaarna waxay eedeeyaan Maraykanka. Waxaa laga yaabaa in jawaabtu, haddii ay mid jirto, ay tahay in dhammaan ay leeyihiin xoogaa eed ah laakiin qofna ma laha dhammaan eedda. Ugu dambeyntii waa dadka reer Ireland kuwa u baahan inay helaan caqli ay ku seexdaan wixii hore oo ay ku baraarugaan mustaqbal ifaya.
Had iyo jeer waxaa jira makhaayadda
Ilaa maalintaas ay timaado, laga yaabee in la fahmi karo sababta whiskey iyo biirka ay yihiin boqorrada dhabta ah ee halkan. Lahaanshaha "pint" waxba ma xalliso, laakiin habeenkii qabowga qaboobaha, waxay diirisaa nafta waxayna ka caawisaa qofka inuu iloobo waxa laga yaabo inay noqdaan kuwo aan la xallin karin. Ireland waxa ay baraysaa in bini'aadamka iyo dunida ay deggan yihiin ay yihiin kuwo kakan, iyo in jawaabaha fudud ay ina dejiyaan waddooyinka dhamaadka ah.
Dr. Peter Tarlow ayaa hogaaminaya barnaamijka SaferTourism ee shirkadda eTN. Waa khabiir caalami ah oo caan ku ah amniga iyo badbaadada dalxiiska. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo safertourism.com.
Pro Israa'iil waxay saxiixday mid ka mid ah derbiyada "nabada" ee kala qaybiya magaalada
Sawirada dadka lagu dilay dhanka Katooliga
Xusuusta Protestant-ka la dilay
Jidka Giants - jaranjarooyinka loogu talagalay Rafaa
Dr. Peter Tarlow oo baranaya sida loo shubo Guinness
Belfast Ireland Israa'iil Bariga Dhexe Northern Ireland Peter Tarlow
Sands Resorts Macao iyo koox
Qaramada Midoobay waxay si aqlabiyad leh u cambaareyneysaa cunaqabateynta Mareykanka ee saaran Cuba